cash dividend(cash dividend) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
हिमालयन डिस्टीलरीले सतप्रतिशत लाभांश बाँड्ने, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । हिमालयन डिस्टीलरीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई सत्प्रतिशत लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । डिस्टीलरीको आज अपरान्ह बसेको बोर्ड बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई सत्प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको निर्णय भएको कम्पनीका सचिव नेत्र तिम्सिनाले बताए । उनकाअनुसार सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्तापूँजीको ५०...
आरएसडिसी लघुवित्तद्वारा लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ । यो कम्पनीको असोज २४ गते बसेको संचालक समितिको १०३ औं बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि ९ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरको कर प्रयोजनका लागि समेत गरी नगद लाभांश ३.६३ प्रतिशत वितरणको निर्णय गरेको हो । हाल यो कम्पनीको चुक्तापूँजी ६७ करोड १५ लाख...
एचजीआईद्वारा लगानीकर्तामाथि धोका, घोषित लाभांशमा २.७५% को कटौति
काठमाण्डौ । बिमा कम्पनीका संचालक समितिहरुले प्रस्ताव गर्ने लाभांशको अंकलाई हेरेरै सेयरमा लगानी गर्नेहरुलाई धोका हुनसक्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स(एचजीआई) । यो कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीका लागि तुलनात्मक रुपमा कम लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यही कम लाभांशमा पनि बिमा समितिले कैंची लगाएको छ । फलस्वरुप...
बैंक खाता अपडेट गर्नुभयो ? नेरुडे र तारागाउँले पठाउँदैछन् नगद लाभांश
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट पारित नगद लाभांश नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले सेयरधनीहरुको बैंक खातामा पठाउने भएका छन् । नेरुडे आज बिहीबारदेखि आफ्नो सेयरधनीहरुको बैंक खातामा नगद लाभांश पठाउन सुरु गरेको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्षका लागि ५.७९ प्रतिशत (बोनस सेयर करसहित) नगद लाभांश...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको नगद लाभांश शेयरधनीको बैंक खातामा
काठमाण्डौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले नगद लाभांश शेयरधनीको बैंक खातामा जम्मा गरेको छ । बैंकले हितग्राही खातामा बैंक खाता अद्यावधिक गराएको शेयरधनीको बैंक खातामा पुस २९ गतेदेखि नगद लाभांश जम्मा गर्न थालेको हो । बैंकले पुस २९ गते सम्पन्न १५ औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको ८।९५९३ प्रतिशत नगद लाभांश करसहित शेयरधनीको बैंक...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट एनएमबी बैंकले वितरण गर्ने भनी पारित गरेको चुक्तापुँजीको १४ प्रतिशत हुन आउने नगद लाभांश आज बिहीबारदेखि सेयरधनीहरुको खातामा पठाउने भएको छ । गत पुस २४ गते सम्पन्न २४ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन गरी बैंकले नगद लाभांश सेयरधनीहरुको खातामा पठाउने भएको हो । यसका लागि बैंकले सेयरधनीहरुलाई आफ्ना...
नेको इन्स्योरेन्सद्वारा ८.४२% नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव
काठमाण्डौ । नेको इन्स्योरेन्स लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफाबाट लगानीकर्तालाई ८.४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको घोषणा गरेको हो । पुस २० गते साँझ बसेको कम्पनीको संचालक समितिको ३८४ औं बैठकले लाभांशमा लाग्ने करसहित कुल ८.४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो...
गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका सेयरधनीहरुलाई ६.५% नगद लाभांश प्रस्ताव
काठमाण्डौ । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि आफ्ना सेयरधनीहरुलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । फाइनान्सको आइतबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । फाइनान्सले सेयरधनीहरुलाई चुक्तापुँजी ८० करोड रुपैयाँको ६.५ प्रतिशतले हुन आउने ५ करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश...
हिमालयन डिस्टीलरीका लगानीकर्ता मालामाल, सतप्रतिशत लाभांश वितरणको घोषणा
काठमाण्डौ । हिमालयन डिस्टीलरी लिमीटेडका सेयरधनी मालामाल हुने भएका छन् । यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि लगानीकर्तालाई सतप्रतिशतभन्दा पनि बढी लाभांशको वितरणको प्रस्ताव गरेसँगै सेयरधनी मालामाल हुने देखिएको हो । कम्पनीको कात्तिक २४ गते बसेको संचालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि कम्पनीका सेयरधनीहरुलाई ५२.६३ प्रतिशत...
महालक्ष्मी बैंकद्वारा १७.८९% लाभांश वितरणको प्रस्ताव
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । बैंकको असोज १६ गते बसेको बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट लगानीकर्तालाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर र ९.८९ प्रतिशत(कर प्रयोजनका लागि समेत गरी) नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल राष्ट्रबैंकबाट...
ओरिएन्टल होटलद्वारा १५.७९% लाभांश वितरणको घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । ओरिएन्टल होटल्स लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । यो कम्पनीको असोज १३ गते साँझ ५ बजे बसेको संचालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत र १०.७९ प्रतिशत(कर प्रयोजनका लागि समेत) नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीको यो प्रस्ताव आगामी...
शिवम् सिमेन्ट्सद्वारा १५.७८९५% लाभांश वितरणको घोषणा
काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्ट्स लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई १५.७८९५ प्रतिशतको दरले लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । कम्पनीको असोज १३ गते साँझ सकिएको संचालक समितिको ६४ औं बैठकले २०७५/७६ को मुनाफा रकममध्येबाट प्रतिसेयर १५.७८९८५ प्रतिशतका दरले(लाभांशमा लाग्ने करसहित) वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । यो हिसाबले कम्पनीले कुल ६९ करोड ४७ लाख ३८ हजार...
समता लघुवित्तद्वारा बम्पर लाभांश वितरणको प्रस्ताव
काठमाण्डौ । समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि बम्पर लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको असोज ९ गते बिहीबार बसेको संचालक समितिको ८१ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सेयरधनीलाई कुल ३१.५८ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र करसहित १६.५८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको...
जनता बैंकद्वारा डबल डिजिटको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । जनता बैंक नेपाल लिमीटेडले डबल डिजिटको लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । असोज ५ गते आइतबार साँझ ५ बजे बसेको बैंक संचालक समितिको २९१ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि लगानीकर्तालाई १२ प्रतिशत लाभांश वितरणको घोषणा गरेको हो । यो बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ३० करोड ८ लाख ४० हजार ६०३ रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।...